Wasiirka Warfaafinta Boobe Oo Meel Mariyay Go’aan Uu Shaqadii Kaga Eryay Masuuliyiinta Agaasimaha Telefishanka Iyo Wargeyska Dawan – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta Somaliland Cabdi Yuusuf Ducaalle (Boobe) ayaa maanta soo saaray go’aamo shaqadii lagaga eryay
Agaasimihii Telefishanka qaranka iyo Gudoomiyihii Wargeyska ku hadla Afka dawlada ee Dawan, isla markaana si ku meelgaadh ah xilalkii ay hayeen loogu magcaabay masuuliyiin kale.
Go’aamada ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu dardar-gelinayo hawlaha wasaaraddaa.
Sidaana waxa uu wasiirku ku sheegay war-saxaafadeed dheer oo uu maanta soo saaray, kaas oo u dhignaa sidan:-
1. Xasan Maxamed Maxamuud: Agaasimaha waaxda maamulka iyo TV-ga Qaranka:
2. Siciid Aadan Cigge:Agaasimaha Radio Hargaysa.
Gobonimo dadkaa muddan, Galladana Allaa iska leh.” ayaa lagu yidhi qoraalka.
Qoraalka wasiirka ayaa soo baxay kadib markii khilaaf iyo muran mudooyinii u danbeeyay ka taagnaa wasaaradda oo sababay inuu soo galo Hanti-dhawrka guud, kaas oo xabsiga u taxaabay bishii hore Agaasimihii xisaabaadka ee Telefishanka oo xadhigiisu muran siyaasadeed ka abuuray wasaaradda, balse damiin lagu soo daayay Markii ay soo dhexgashay Madaxtooyadu, taas oo wasiirku ku adkaystay in qaybaha wasaaradda ee kale uu galo hanti-dhawrku. haddii kale ay taasi noqonay mid lagu waxyeelaynayo sumcadiisa, isla markaana aanay xaq ahayn in hanti-dhawrku u gacandhaafo shaqaalihiisa.